Keshia Medellin - Kulliyadaha Hore ee Colorado
Mrs. Keshia Medellin waxay leedahay 20 sano oo waayo-aragnimo waxbarasho ah. Kahor inta uusan noqon Madaxa Dugsiga, Keshia wuxuu ahaa Hormuudka Tacliinta ee CEC Castle Rock. Waxay kormeeraysay oo hogaamisay dhammaan hawlaha tacliinta ee dugsiga waxayna maamushay shaqaale ka kooban 20 macalin. Waxay hogaamisay kooxda MTSS iyo RTI ee dugsiga waxayna ka mid ahayd abuurista deeqaha, UIP-yada, Qorshayaasha Kobaca Waxbarashada, iyo horumarinta manhajka. Keshia waxay ahayd tababare waxbarid iyo xubin ka mid ah kooxda hogaaminta dhismaha ee dugsiga sare ee Castle Rock iyo borofisar ku takhasusay taariikhda CEC Parker laga bilaabo 2014-2018. Waxay shahaadada BA ee Taariikhda ka qaadatay Jaamacadda California, San Diego, MA Jaamacadda Chicago, iyo MA in Teaching oo ka socda Jaamacadda National Louis University.
Waxaa jirta xigasho ay jeceshahay, "Isticmaal waxbarashada si aad u dhammaystirto riyooyinka ugu xun ee awoowyaashaa." Waxay aad u aaminsan tahay awoodda in waxbarashada loo isticmaali karo in lagu beddelo nolosha, abuurto rajo, iyo abuurista fursad. Marka ay ka fikirto hadafka CEC oo ay hoos u dhigto nuxurkeeda, waxay ku saabsan tahay siinta fursadaha ardaydeena. Maalin kasta, ardaydu waxay helayaan fursad ay ku koraan tacliin ahaan iyo shakhsi ahaanba, fursad ay ku dareemaan oo ay muujiyaan naxariis, iyo fursad ay ku sameeyaan xidhiidh iyo dareemaan in la arkay. Maalin kasta, ardaydu waxay helayaan ikhtiyaar ay ku hantaan fursadahaas, oo ay helaan faa'iidooyinka, oo ay gaaraan riyadooda. Waxayna madax ka tahay dugsiga, waxay aaminsan tahay inay mas'uuliyadeeda tahay inay taageerto riyada ardayda.
Shakhsi ahaan, Keshia waa xaas iyo hooyo 3 gabdhood leh kuwaas oo ku raaxaysanaya waxa dugsiyada charter ay ku siin karaan doorashooyinka waxbarashada. Waxay jeceshahay inay wax karsato, safarto, qurxiso, ciyaarta turubka oo ay wax akhrido.